उत्तम व्यवसाय निर्माण गर्दै • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
नयाँ व्यवसाय सुरू गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईंले सुरु गर्नु अघि किन एक व्यवसाय योजना सिर्जना गर्नुपर्छ जान्नुहोस्। यो सत्रले ब्यापार योजनाको प्रमुख कम्पोनेन्टहरू समेट्ने छ, विकासको लागि प्रभावकारी रणनीति सिर्जना गर्ने यसको प्राथमिक उद्देश्यहरू बुझ्ने, तपाईंको भविष्यको वित्तीय आवश्यकताहरू निर्धारण गर्ने, र लगानीकर्ता र ndणदाताहरूलाई आकर्षित गर्ने सहित। घटना स्थलमा तपाईंको स्थान सुरक्षित गर्नुहोस्.
तपाईको व्यवसायका लागि aण खोज्दै हुनुहुन्छ? तपाईंले आवेदन गर्नु अघि कुन कागजातहरू चाहिन्छ जान्नुहोस्। यस सत्रले तपाईंलाई basicण आवेदन प्रक्रियाको लागि तयार हुनको लागि कुन आधारभूत कागजातहरू अगाडि नै आवाश्यक हुन्छ बुझ्न मद्दत गर्दछ। घटना स्थलमा तपाईंको स्थान सुरक्षित गर्नुहोस्.
एक ofण को जीवन
तपाईं loanणको लागि आवेदन दिन तयार हुनुहुन्छ, अब के? तपाईंको सानो व्यवसायको लागि loanण प्रक्रिया र अन्य कोष विकल्पहरूको बारेमा जान्नुहोस्। यस सत्रले beginningण प्रक्रिया शुरू देखि अन्त सम्म कभर गर्नेछ। यो वैकल्पिक कभर पनि जब तपाइँ एक परम्परागत बैंक वा वित्तीय संस्था द्वारा अस्वीकृत हुन सक्छ। घटना स्थलमा तपाईंको स्थान सुरक्षित गर्नुहोस्.
बैंक र बैंकरहरू
के तपाइँसँग एक बैंक पार्टनर छ? बैंकिंग सेवाहरू र उत्पादनहरू बारे जान्नुहोस् र कुन बैंकि partner पार्टनर तपाईंको लागि सही हुन सक्छ। यस सत्रले एक बैंकरमा के हेर्ने भनेर कभर गर्दछ र कुन बैंक पार्टनर तपाइँको लागि सही हुन सक्छ भनेर निर्धारण गर्नका लागि सुझावहरू। तपाईं बैंक उत्पादनहरू र सेवाहरूको बारेमा पनि सिक्नुहुनेछ र कसरी तिनीहरूले तपाईंको व्यवसायलाई मद्दत गर्दछन्। घटना स्थलमा तपाईंको स्थान सुरक्षित गर्नुहोस्.
DT2 ow डाउनटाउन डचटाउन र अन्य छिमेकी साझेदारहरू डचटाउन व्यापार मालिकहरू, नयाँ र स्थापित, हाम्रा व्यवसायहरू र छिमेकको फलोफललाई मद्दत गर्न संसाधनहरू ल्याउन काम गर्दछन्। भ्रमण गर्नुहोस् dutchtownstl.org/ व्यवसाय वा हाम्रो सामिल हुनुहोस् डचटाउन व्यवसाय मालिकहरू फेसबुक समूह थप पत्ता लगाउन।
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो अप्रिल 19th, 2021 .
DutchtownSTL.org कारोबार राम्रो व्यवसाय निर्माण गर्दै